Ciidamada Amniga oo toogtay mid ka mid ah rag Miino ku aasayay Xaafada Suuq Bacaad - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamada Amniga oo toogtay mid ka mid ah rag Miino ku aasayay...
Ciidamada Amniga oo toogtay mid ka mid ah rag Miino ku aasayay Xaafada Suuq Bacaad
Ciidamada loo yaqaano Ilaalada Shacabka ee Nabadsugida ayaa xalay toogasho ku dilay mid ka mid ah rag xalay saqdii dhexe miino ku aasayay Xaafada Suuq Bacaad ee degmada Yaaqshiid.
Guddoomiye kuxigeenka Arrimaha Bulshada degmada Yaaqshiid C/llaahi Shiilow ayaa sheegay in saddex nin oo ku hubeysnaa Bastoolado ay miino aasayeen ay ka war heleen Ciidamada Ilaalada shacabka, dabadeedna uu iska hor imaad dhex maray.
Is rasaaseynta dhex martay ayaa sababtay inuu goobta ku geeriyooday mid ka mid ah raggii miinada aasayay, waxaana goobta ka baxsaday labadii kale.
Ciidamada loo yaqaano Ilaalada Shacabka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka qeyb qaadanayay sugida amniga degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, waxaana ay ka hortageen isku dayo falal amni darro ah oo ay geysan lahaayeen kooxaha burcada iyo kooxaha kale ee fuliya dilalka qorsheysan.
Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay miinooyinka la dhigo waddooyinka, waxaana u dambeysay xalay miino lagu soo qariyay jawaan oo la dhigay agagaarka barta Koontarool ee Isgoyska Sayidka ka war helay Ciidamada Amniga, kaasoo markii dambe la qarxiyay, waxaana ku dhaawacantay labo qof.